निकम्मा विश्व स्वास्थ्य संगठन किन ? « हातमा खबर-जहाँ तपाइँ, त्यहीं खबर
निकम्मा विश्व स्वास्थ्य संगठन किन ?
प्रकाशित मिति : २०७६, १७ चैत्र सोमबार २०:४०
पुरञ्जन आचार्य ।
निकम्मा विश्व स्वास्थ संगठन किन ?
किन ? पढौ । आज काेराेना भाईरसवाट विश्व अवस्था के छ? कति विरामी छन ,कति ठिक भए र कति मरे यही हेरेर हाम्राे दिन वितिरहेकाे छ । यसकाे विकासक्रम पनि अलिकति मेहनत गर्दा जान्न सकिन्छ । मित्र श्याम दाहालले यसतर्फ केही सुचनाहरू फेशबुकमा क्राेनाेलाेजिकली प्रस्तुत गरेका छन । मेराे याे आलेख केही पर हेर्छ ।
WHO लाई अहिले Dr Tedros Ghebreyesus ले लिड गर्छन । यी ईथाेपियन पुर्वस्वास्थ मन्त्री चीनकाे भिटाेमा याे पदमा पुगेका हुन् । ईथाेपियाकाे रूलिङ पार्टीसँगसंग यिनकाे अझै सम्बन्ध छ । र, ईथाेपियाकाे रूलिङ दल चीनकाे नियन्त्रणमा छ । सवै गडबडी र आजकाे समस्या र अवस्था यहीबाट शुरू भयाे ।
एउटा विश्व संस्थामा, संस्थाकाे आदर्श अनुरूप डा टेडराेजले आफ्नाे भूमिका ननिभाएर चीनकाे सरकारी प्रेसकिप्सनमा लालमाेहर लगाए । यसकाे कथा र व्यथा WHO काे वेभसाईट आफै बाेल्छ ।
विगतमा SARs cov2 मा पनि चीनले WHO चिफ ब्रेण्टलिनलाई अहिले जस्तै आफ्नाे ईशारामा नचाउन खाेजेकाे थियाे, धम्काएकाे थियाे ।
प्रलाेभन पनि नदिएकाे हाेईन ,तर २ पटक नर्वेकाे प्रम भएकी उनले चीनकाे दवाव अस्विकार गरिन । समयमै प्रभावित क्षेत्रलाई लकडाउन गर्न लगाईन। र, १७ वर्ष अगाडि नै युवानवाट हुनसक्ने महामारीलाई राेकिन । याे Right man in right place भयाे ।
याे पटक शुरू देखि नै WHO घुस्या भयाे , खासगरी यसकाे नेतृत्व । सर्वत्र काेराेना फैलिदा याे man to man फैलिदैन भनेर आफ्नाे वेभसाईडमा विज्ञप्ती निकाल्दै थियाे ।
युवानकाे अन्तराष्ट्रिय उडान बन्दकाे विराेधमा विज्ञप्ती निकाल्याे ।
भाईरस जहाँवाट उत्पत्ति हुन्छ भाईरसकाे नाम त्यहीकाे नदी, भुगाेल आदीमा राखिन्छ । जस्ताे ईबाेला, जिकाे आदी । तर यी निकम्मा डा टेडराेजले चीनलाई खुशी पार्न क्राउन जस्ताे देखिन्छ त्यसैले काेराेना नाम सुझाए ।
WHO किन यत्राे रिस्क उठाउन वाध्य भयाे ?
पहिलेा डा टेडराेज ईथाेपियाकाे दुई पटक स्वास्थमन्त्री हुँदा नै चीनले उनलाई याे जागिरमा निश्चित गरेकाे थियाे ।
दाेश्राे चीनकाे सहयाेगमा ईथियाेपियामा ठुला साना विकास परियोजना संचालित छन् ।
तेश्राे अहिले चीन अमेरिका पछिकाे धनकुवेर हाे र ८६मिलियन डलर WHO मा उसकाे सहयाेग छ ।
के बुझ्ने र के शिक्षा लिने ?
पहिलाे , सेटिङकाे राेग नेपालमा भन्दा भयावह छ अन्तर्राष्टिय जगतमा ।
दाेश्राे लाेभी र स्वार्थीलाई संवेदनशिल ठाउँमा नेतृत्व दिदा र नेतृत्वमा पुगाउँदा देशमात्र हाेईन मानवसभ्यता समाप्त हुने संकट आउछ ।
WHO काे निरिहता बुझ्न र उस्ले चीनी सत्ताकाे चाकरी गरेकाे थप जानकारी पाउन WHO कै वेभ साईडमा जान सकिन्छ । आजकाे दिन किन आयाे सवै प्रस्ट हुन्छ ।